Ny fanjakan'Andriamanitra (Fizarana 6) - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2015-04 mpandimby ny Magazine > Ny Fanjakan'Andriamanitra (ampahany 6)
Ao amin’ny Testamenta Vaovao ny fiangonana (grika: ekklesia) dia antsoina hoe olon’Andriamanitra. Amin’izao vanim-potoan’izao tontolo izao (taona hatramin’ny fiavian’i Kristy voalohany) dia miangona na miray hina mba hanorina fiaraha-monina. Mivory miaraka amin’ny fitoriana ny filazantsara ny mpikamban’ny Fiangonana, araka ny nampianarin’ny apostoly voalohany — dia ireo izay nomena hery sy nirahin’i Jesosy mihitsy. Ny vahoakan’Andriamanitra dia mandray ny hafatry ny fanambarana ara-Baiboly, izay tehirizina ho antsika, ary noho ny fibebahana sy ny finoana, dia manaraka ny tena maha-izy azy Andriamanitra araka io fanambarana io. Araka ny voalazan’ny Asan’ny Apostoly, dia ny olon’Andriamanitra no “tsy mifikitra amin’ny fampianaran’ny Apostoly, amin’ny fiombonana sy amin’ny famakiana ny mofo ary amin’ny fivavahana.” ( Asa. 2,42Tamin'ny voalohany, ny Fiangonana dia ahitana ireo mpino mahatoky sisa tavela ao amin'ny Isiraely avy amin'ny Fanekena Taloha. Nino izy ireo fa i Jesosy dia nanatanteraka ny fampanantenana nambara taminy ho Mesia sy Mpamonjy an’Andriamanitra. Saika niaraka tamin’ny Pentekosta voalohan’ny Fanekempihavanana Vaovao, ny olon’Andriamanitra dia nandray ny hafatry ny fanambarana ara-Baiboly, izay notehirizina ho antsika, ary noho ny fibebahana sy ny finoana, dia manaraka ny tena maha-izy azy Andriamanitra araka io fanambarana io. Araka ny voalazan’ny Asan’ny Apostoly, dia ny olon’Andriamanitra no “tsy mifikitra amin’ny fampianaran’ny Apostoly, amin’ny fiombonana sy amin’ny famakiana ny mofo ary amin’ny fivavahana.” ( Asa. 2,42Tamin'ny voalohany, ny Fiangonana dia ahitana ireo mpino mahatoky sisa tavela ao amin'ny Isiraely avy amin'ny Fanekena Taloha. Nino izy ireo fa nanatanteraka ny fampanantenana nambara taminy tamin’ny maha-Mesia sy Mpamonjy an’Andriamanitra azy i Jesosy. Saika tamin’ny fotoana nitomboan’ny fetin’ny Pentekosta voalohany tao amin’ny Fanekena Vaovao
Asehon’ny Testamenta Vaovao anefa fa tsy tonga lafatra io vahoaka io, fa tsy fakan-tahaka. Miharihary indrindra izany ao amin’ilay fanoharana momba ny hazandrano azon’ny harato ( Matio 13,47-49). Ny fiangonan'ny fiangonana mivory manodidina an'i Jesosy ary ny teniny dia hiharan'ny fisarahana amin'ny farany. Ho avy ny fotoana izay hazava fa ny sasany izay nahatsapa fa anisan’ity fiangonana ity dia tsy naneho ny tenany ho nandray an’i Kristy sy ny Fanahy Masina, fa nanevateva sy nanda azy ireo. Izany hoe tsy nametraka ny tenany teo ambanin’ny fitondran’i Kristy ny sasany tamin’ny fiangonana, fa nanohitra ny fibebahana sy niala tamin’ny fahasoavan’ny famelan’Andriamanitra sy ny fanomezana ny Fanahy Masina. Ny hafa kosa nanova ny fanompoan’i Kristy tamin’ny fanekena an-tsitrapo ny Teniny. Tsy maintsy miatrika ny adin’ny finoana indray isan’andro anefa ny tsirairay. Ilazana ny rehetra. Tokony hotarihin’ny rehetra amim-pahalemem-panahy, hiatrika ny asan’ny Fanahy Masina mba hizara amintsika ny fanamasinana izay novidin’ny tenan’i Kristy tamin’ny endriny olombelona ho antsika. Fanamasinana maniry ny hamela ny tenantsika taloha ho faty isan'andro. Ka ny fiainan’ity fiangonan’ny fiangonana ity dia isan-karazany fa tsy tonga lafatra sy madio. Amin’izany dia mahita ny tenany ho tohanan’ny fahasoavan’Andriamanitra hatrany ny fiangonana. Raha ny fibebahana no resahina dia manomboka sy nohavaozina hatrany ary nohavaozina ny mpikamban’ny Fiangonana Ny fanoherana ny fakam-panahy, ary koa ny fanatsarana sy ny famerenana amin’ny laoniny, izany hoe ny fampihavanana amin’Andriamanitra, dia miara-dalana. Tsy ilaina izany rehetra izany raha toa ka tsy maintsy maneho ny endriky ny fahalavorariana ny fiangonana amin’izao fotoana izao. Rehefa miseho io fiainana mihetsiketsika sy mivoatra io, dia mifanaraka tsara amin’ny hevitra hoe ny fanjakan’Andriamanitra dia tsy mampiseho ny tenany amin’ny fahatanterahany amin’izao fotoana izao. Ny olon’Andriamanitra dia miandry amin’ny fanantenana, ary ny fiainan’izay azy rehetra dia miafina ao amin’i Kristy (Kolosiana). 3,3) ary mitovitovy amin’ny vilany tany mahazatra (2. Korintiana 4,7). Miandry ny famonjena antsika amin’ny fahatanterahana isika.
Zava-dehibe ny manamarika miaraka amin'i Ladd fa ny apostoly voalohany dia tsy nifantoka tamin'ny toriteniny momba ny fiangonana, fa ny fanjakan'Andriamanitra. Tamin’izay ireo nanaiky ny hafatr’izy ireo no nivory ho fiangonana, amin’ny maha-Christi ekklesia. Midika izany fa ny Fiangonana, vahoakan’Andriamanitra, dia tsy zavatra ivavahana na ivavahana. Ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, Andriamanitra Telo Izay Iray ihany no io. Ny fitoriana sy fampianarana ny fiangonana dia tsy tokony hahatonga ny tenany ho zavatra ara-pinoana, izany hoe tsy tokony hihodinkodina amin’ny tenany manokana. Noho izany, i Paoly dia nanantitrantitra fa “tsy [isika] no manambara ny tenanay [...] fa Jesosy Kristy ho Tompo, ary ny tenanay ho mpanomponareo noho ny amin’i Jesosy.” (2. Korintiana 4,5; Baiboly Zurich). Ny hafatra sy ny asan’ny fiangonana dia tsy tokony hiantehitra amin’ny tenany, fa amin’ny fitondran’Andriamanitra telo izay iray, loharanon’ny fanantenany. Hanome ny fahefany ho an’ny zavaboary manontolo Andriamanitra, dia fanapahana naorin’i Kristy tamin’ny asany teto an-tany, ary koa tamin’ny fandatsahana ny Fanahy Masina, nefa hamirapiratra amin’ny fahatanterahana ihany amin’ny fotoana iray. Ny fiangonana, izay mivory manodidina an’i Kristy, dia mitodika any amin’ny asa fanavotana vitany ary mialoha ny fahatanterahan’ny asany mitohy. Izay no tena ifantohan’izy ireo.
Natsangana ny Fanjakan'Andriamanitra, saingy mbola tsy nivoatra ho lasa lavorary. Araka ny tenin'i Ladd: "Efa misy, saingy tsy mbola feno." Ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany mbola tsy tanteraka. Ny olona rehetra na izy dia tafiditra ao anatin'ny fiarahamonin'ny vahoakan'Andriamanitra, miaina amin'ity vanimpotoana ity izay mbola tokony ho tanteraka, ary ny Fiangonana, ny fiangonan'ireo izay mikarakara an'i Jesoa Kristy, ny filazantsarany sy ny iraka ampanaovina azy, dia tsy afa-miala amin'ireo olana sy famerana. ny hitoetra tsy tapaka amin'ny ota sy ny fahafatesana. Noho izany dia mila fanavaozana sy fanavaozana tsy tapaka. Tsy maintsy tohizany hatrany ny fiarahana amin'i Kristy amin'ny alàlan'ny fijoroany amin'ny teniny sy ny famahanana sy fanavaozana tsy misy fanajana ary hatsangana amin'ny fanahiny feno famindram-po. Ladd dia namintina ny fifandraisan'ny Fiangonana sy ny Fanjakan'Andriamanitra amin'ireto fanambarana dimy ireto:2
Tsy hataon 'ny Fiangonana amin' ny fomba feno, maharitra na maharitra. Na izany aza, amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina sy miaraka amin'ny Tompo, ny vahoakan'Andriamanitra dia afaka maneho fanehoan-kevitra mivaingana amin'ny fitahiana ny fanjakana ho avy, satria Kristy nandresy ny ota, ny ratsy ary ny fahafatesana ary afaka manantena ny ho avy fanjakana isika. Ny famantarana lehibe indrindra nataony dia mifarana amin'ny fitiavana - fitiavana iray izay taratry ny fitiavan-dray ny zanakalahy amin'ny Fanahy Masina, ary ny fitiavan-dray ho antsika sy ny zavatra noforoniny rehetra, amin'ny alàlan'ny Zanaka, amin'ny Fanahy Masina. Ny Fiangonana dia afaka mijoro ho vavolombelon'ny fanjakan'i Kristy amin'ny fanompoam-pivavahana, amin'ny fiainana andavan'andro ary amin'ny fanompoana ny soa iraisan'ireo izay tsy mpikamban'ny fiangonana Kristiana. Ny fijoroana vavolombelona tsy manam-paharoa sy manaitra indrindra omen'ny Fiangonana manoloana an'ity zava-misy ity dia ny fanolorana ny Komoniona Masina, raha adika amin'ny fitoriana ny Tenin'Andriamanitra amin'ny fanompoana. Eto, ao anatin'ny faritry ny fiangonan'ny fiangonana tafangona, isika dia mahita ny fijoroana ho tena mivaingana, tsotra, marina, mivantana ary mahomby amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'i Kristy. Eo amin'ny alitarany no ahitantsika, amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina, ilay efa misy, nefa mbola tsy tonga lafatra, dia nanjakan'i Kristy tamin'ny alalany. Eo amin'ny latabatry ny Tompo dia mijery ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana isika ary miandrandra ny fanjakany rehefa mizara fiarahana aminy isika satria manatrika amin'ny alalan'ny Fanahy Masina. Ao amin'ny alitarany no ahitantsika mialoha ny fanjakany. Manatona ny latabatry ny Tompo isika mba hizara ao aminy araka ny nampanantenainy antsika ho Tompontsika sy Mpamonjy antsika.
Ny fiainana eo anelanelan’ny fiavian’i Kristy voalohany sy ny fiaviany fanindroany dia midika zavatra hafa koa. Midika izany fa eo amin'ny fivahiniana masina ara-panahy ny tsirairay - ao anatin'ny fifandraisana tsy mitsaha-mivoatra amin'Andriamanitra. Ny Tsitoha dia tsy vita amin’ny olona na amin’iza na amin’iza raha ny amin’ny fisintonana azy ho eo amin’ny tenany sy ny hanosika azy hitombo tsy an-kijanona ny fitokiana aminy, ary koa ny fanekena ny fahasoavany sy ny fiainam-baovao nomeny azy, amin’ny fotoana rehetra, isan’andro. Adidin’ny fiangonana ny manambara ny fahamarinana amin’ny fomba tsara indrindra momba an’Andriamanitra ao amin’i Kristy sy ny fomba hanehoany ny tenany eo amin’ny fiainan’ny olona tsirairay. Antsoina ny Fiangonana hijoro ho vavolombelona tsy tapaka amin’ny teny sy ny asa momba ny toetra sy ny toetran’i Kristy ary ny fanjakany ho avy. Na izany aza, tsy afaka fantatsika mialoha hoe iza (hampiasa ny teny an'ohatra nataon'i Jesosy) no ho isaina na trondro ratsy. Anjaran’Andriamanitra mihitsy ny hanasaraka ny tsara sy ny ratsy amin’ny fotoana mety. Tsy anjarantsika ny mampandroso ny dingana (na ny manemotra izany). Tsy isika no mpitsara farany eto sy ankehitriny. Fa kosa, feno fanantenana fa hiasa ao amin’ny tsirairay Andriamanitra amin’ny alalan’ny Teniny sy ny Fanahy Masina, dia tokony hitoetra ho mahatoky amin’ny finoana sy hanam-paharetana amin’ny fanavahana. Ny fijanonana ho mailo sy fanaovana laharam-pahamehana ny zava-dehibe indrindra, ny fametrahana ny zava-dehibe indrindra amin'ny toerana voalohany ary ny fanomezan-danja kely ny tsy dia manan-danja dia zava-dehibe amin'izao fotoana izao. Mazava ho azy fa tsy maintsy manavaka ny zava-dehibe sy ny tsy manan-danja isika.
Ankoatra izany, ny fiangonana dia miantoka fiaraha-monina feno fitiavana. Ny tena asany dia tsy ny miantoka ny fiangonana toa lavorary na tonga lafatra tanteraka amin'ny fiheverana azy io ho tanjona voalohany ny hanilihana tsy ho ao amin'ny fiaraha-monina ireo izay tonga amin'ny vahoakan'Andriamanitra nefa tsy mbola miorina amin'ny finoana na amin'ny fomba fiainany tsy mbola hita taratra araka ny tokony ho izy. ny fiainan’i Kristy. Tsy azo tanterahina tanteraka izany amin’izao vanim-potoana ankehitriny izao. Araka ny nampianarin’i Jesoa, dia niezaka nanongotra ny tsimparifary izy (Matio 13,29-30) na ny fanavahana ny trondro tsara sy ny ratsy (and 48) dia tsy mitondra fiombonana tonga lafatra amin’izao vanim-potoana izao, fa manimba ny tenan’i Kristy sy ny vavolombelony. Hiteraka fanambaniana foana ny hafa ao amin’ny Fiangonana izany. Izany dia hitarika ho amin'ny ara-dalàna goavana sy mitsara, izany hoe legalisma, izay sady tsy maneho ny asan'i Kristy manokana, na ny finoana sy ny fanantenana ny amin'ny fanjakany ho avy.
Ny fiainana eo amin’ny fiavian’i Kristy roa tonta dia tsy manilika ny filana famaizana sahaza ny fiangonana, fa tokony ho fananarana feno fahendrena, faharetana, fangoraham-po ary, ankoatra izany, fananarana mahari-po (fitiavana, mahery, fanabeazana), izay manoloana ny Ny fitiavan’Andriamanitra ny olona rehetra koa dia entin’ny fanantenana ho an’ny rehetra. Tsy hamela ny mpiangona hanenjika ny mpiray finoana aminy anefa izany (Ezekiela 34), fa kosa hiaro azy ireo. Izy io dia hanome ny mpiara-belona aminy fampiantranoana, fiaraha-monina, fotoana ary toerana mba hikatsahany an’Andriamanitra sy hiezahany ho amin’ny maha-zava-dehibe ny fanjakany, hahitany fotoana hibebahana, hanaiky an’i Kristy ao anatin’ny tenany ary hirona bebe kokoa hatrany Aminy amim-pinoana. Misy fetrany anefa ny zavatra azo atao, anisan’izany ny amin’ny famotopotorana sy ny fametrahana ny tsy rariny mihatra amin’ny mambran’ny fiangonana hafa.Hitantsika izany fihetsehana izany eo amin’ny fiainan’ny fiangonana tany am-boalohany, araka ny voarakitra ao amin’ny Testamenta Vaovao. Ny Asan'ny Apôstôly sy ny Taratasy ao amin'ny Testamenta Vaovao dia manaporofo izany fanao iraisam-pirenena izany amin'ny fifehezana ny fiangonana. Mitaky fitarihana feno fahendrena sy mangoraka izany. Na izany aza, dia tsy ho azo atao ny hahatratra ny fahalavorariana ao. Na izany aza, tsy maintsy iezahana izany, satria ny safidy dia ny tsy fifehezana na ny fitsarana tsy miangatra, ny idealisma manamarin-tena amin’ny fomba tsy mety ary tsy manao ny rariny amin’i Kristy. Nanaiky izay rehetra nanatona Azy i Kristy, nefa tsy nandao azy ireo mihitsy Izy. Nasainy nanaraka azy kosa izy. Ny sasany namaly, ny sasany tsy namaly. Manaiky antsika i Kristy na aiza na aiza misy antsika, saingy ataony izany mba hanosika antsika hanaraka azy. Ny fandraisana sy ny fandraisana ny asan’ny Fiangonana dia ny amin’ny fandraisana sy ny fandraisana, fa eo amin’ny fitarihana sy fananarana ireo izay mijanona mba hibebahany sy hatoky an’i Kristy ary hanaraka Azy amin’ny maha-izy azy. Na dia mety ilaina aza ny fandroahana (fanilikilihana amin’ny Fiangonana) ho safidy farany, dia tokony hiorina amin’ny fanantenana fiverenana amin’ny Fiangonana amin’ny hoavy izany, satria manana ohatra avy ao amin’ny Testamenta Vaovao isika (1. Korintiana 5,5; 2. Korintiana 2,5-7; Galatianina 6,1) mibodo.
Be dia be no mino fa i Jesosy dia tonga mba hitondra vahoakan’Andriamanitra lavorary na tontolo tonga lafatra eto sy ankehitriny. Ny Fiangonana mihitsy angamba no namorona izany fahatsapana izany amin’ny finoana fa izany no tian’i Jesosy. Azo heverina fa ny ampahany lehibe amin'ny tontolon'ny tsy mpino dia mandà ny filazantsara satria tsy nahatsapa ny fiarahamonina na izao tontolo izao tonga lafatra ny fiangonana. Maro no toa mino fa ny kristianisma dia mijoro amin'ny endriky ny idealisma iray, kanefa tsy tanteraka ny idealisma toy izany. Vokany, misy ny mandà an’i Kristy sy ny filazantsarany satria mitady idealy efa misy izy ireo na fara faharatsiny hotanterahina tsy ho ela ka mahita fa tsy afaka manolotra izany idealy izany ny fiangonana. Ny sasany maniry an'io izao na tsia mihitsy. Mety handà an’i Kristy sy ny filazantsarany ny hafa satria nilavo lefona tanteraka ary efa very fanantenana amin’ny zava-drehetra sy ny olona rehetra, anisan’izany ny Fiangonana. Mety niala tamin’ilay antokom-pivavahana ny sasany satria tsy nahatanteraka ny idealy iray izay ninoany fa hanampy ny olony ho tratrarin’Andriamanitra ny fiangonana. Ireo izay manaiky izany - izay mampitovy ny fiangonana amin'ny fanjakan'Andriamanitra - dia hanatsoaka hevitra fa na Andriamanitra dia tsy nahomby (satria mety tsy nanampy ny olony ampy izy) na ny olony (satria mety tsy niezaka mafy izy ireo). Na izany na tsy izany dia tsy tratra ny idealy na amin’ny lafiny inona na amin’iza na amin’iza ka toa tsy misy antony tokony hanohizan’ny maro an’io fiaraha-monina io.
Saingy ny Kristianisma dia tsy momba ny ho tonga olona tonga lafarin'Andriamanitra izay, noho ny fanampian'ny Tsitoha, dia mahatsapa fiaraha-monina na tontolo tonga lafatra. Ity endrika ideisma vita amin'ny Kristianisma ity dia manantitrantitra fa raha toa isika ka marina, tso-po, mahatoky, radikaly na hendry dia mahavita manatratra ny tanjontsika, dia afaka hahatanteraka ny idealy tian'Andriamanitra hotanterahina ny olony. Koa satria tsy nisy izany teo amin'ny tantaran'ny Fiangonana manontolo, ireo idealista koa dia mahalala tsara hoe iza no homena tsiny - ireo hafa antsoina hoe "kristiana". Amin'ny farany, na izany aza, ny fianakavian'izy ireo dia matetika iharan'ny sain'ireo idealista, izay mahita fa tsy afaka ny hahatanteraka ny idealy ihany koa izy ireo. Rehefa mitranga izany dia milentika any amin'ny famoizam-po sy fiampangana ny tenanao ny idealy. Ny fahamarinana evanjelika dia mampanantena fa, noho ny fahasoavan'ilay Tsitoha, ny fitahian'ny fanjakan'Andriamanitra ho avy dia efa miditra amin'ity vanona tontolo ratsy ity. Noho izany antony izany, dia afaka mahazo tombony amin'ny zavatra nataon'i Kristy ho antsika isika ary manaiky sy mankafy ny fitahiana alohan'ny hahatanterahan'ny Fanjakany. Ny fijoroana ho vavolombelona manan-danja indrindra amin'ny fahatokisana fa ho avy ity fanjakana ho avy ity dia ny fiainana, ny fahafatesana, ny fitsanganana amin'ny maty ary ny fiakaran'ny Tompon'aina velona. Nampanantena ny fahatongavan'ny fanjakany ho avy izy ary nampianatra antsika, amin'izao fotoana izao, izao tontolo izao ratsy izao, fahatsinjovana mialoha, fampivoarana, voaloham-bokatra, lova avy amin'ilay fanjakana ho avy. Tsy maintsy mitory fanantenana ho an'i Kristy isika ary ny asany efa notohizany sy notohizantsika fa tsy ny idealy idealy. Izahay dia manao izany amin'ny fanamafisana ny fahasamihafana eo amin'ny Fiangonana sy ny Fanjakan'Andriamanitra, ary mandritra ny fotoana mitovy amin'ny fanekena ny fifandraisan'izy ireo amin'i Kristy amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina sy ny fandraisana anjara ho vavolombelontsika - famantarana famantarana sy fanoharana amin'ny fanjakany ho avy.
I Johannes Calvin dia nilaza taloha fa i Kristy dia "tamin'ny fomba iray fa tsy tamin'ny fomba".3 Nasehon’i Jesosy ny tsy fisiany, izay mampisaraka azy amintsika amin’ny fomba sasany, tamin’ny filazana tamin’ny mpianany fa handeha hanomana toerana izay tsy ahafahan’izy ireo manara-dia azy izy. Hiaraka amin’ny Ray amin’ny fomba izay tsy ho vitany nandritra ny fotoana niainany teto an-tany Izy (Jao 8,21; 14,28). Fantany fa mety ho hitan’ny mpianany ho toy ny fihemorana izany, kanefa nanome toromarika azy ireo mba hihevitra izany ho toy ny fandrosoana ka mahasoa azy ireo, na dia mbola tsy manome ny ho avy, ny tsara farany sy tonga lafatra aza. Ny Fanahy Masina, izay teo amin’izy ireo, dia mbola ho ao aminy sy hitoetra ao aminy4,17). Na izany aza anefa dia mampanantena ihany koa i Jesoa fa hiverina tahaka ny nandaozany an’izao tontolo izao koa izy – amin’ny endrik’olombelona, ​​ara-batana, hita maso (Asa. 1,11). Ny tsy fisiany amin’izao fotoana izao dia mifanitsy amin’ny fanjakan’Andriamanitra mbola tsy vita, izay tsy mbola tonga amin’ny fahatanterahana noho izany. Amin'izao fotoana izao, izao tontolo izao ratsy izao dia ao anatin'ny toe-javatra mandalo, tsy misy intsony (1. kor7,31; 1. Johannes 2,8; 1. Johannes 2,1Ao anatin’ny fanolorana ny fahefana ho an’ny mpanjaka mitondra ny zava-drehetra amin’izao fotoana izao. Rehefa vitan’i Jesosy io dingana io amin’ny fanohizana ny fanompoany ara-panahy, dia hiverina izy ary ho lavorary ny fanapahany izao tontolo izao. Ho hitan’ny rehetra amin’izay ny maha-izy azy sy ny nataony. Hiankohoka eo anatrehany ny zava-drehetra, ary ho fantatry ny rehetra ny marina sy ny maha izy azy (Filipianina 2,10). Amin’izay fotoana izay ihany no hisehoan’ny asany manontolo, ka ny halaviran-tany dia manondro zavatra manan-danja izay mifanaraka amin’ny fampianarana hafa. Na dia tsy eto an-tany aza izy, dia tsy ho fantatra na aiza na aiza ny fanjakan’Andriamanitra. Tsy haharihary amin’ny fomba feno koa ny fitondran’i Kristy, fa hafenina amin’ny ankapobeny. Lafin-javatra maro amin’izao vanim-potoanan’izao tontolo izao feno fahotana izao no mbola hitohy, ka hanimba ireo izay milaza ny tenany ho azy, izay an’i Kristy, ary manaiky ny fanjakany sy ny fanjakany. Ny fijaliana, ny fanenjehana, ny faharatsiana - na ara-moraly (izay nataon'ny tanan'olombelona) na ara-boajanahary (noho ny fahotan'ny olombelona rehetra) - dia hitohy. Hitoetra hatrany ny ratsy ka ho hitan’ny maro fa tsy nandresy i Kristy ary tsy ambony noho ny rehetra ny fanjakany.
Ny fanoharana nataon’i Jesosy momba ny fanjakan’Andriamanitra dia mampiseho fa amin’izao fotoana izao dia samy hafa ny fihetsika ataontsika manoloana ny teny velona sy voasoratra ary torina. Ny voan'ny teny dia tsy mahomby indraindray, fa any amin'ny toerana hafa kosa dia mianjera amin'ny tany lonaka. Ny sahan'izao tontolo izao dia mitondra vary sy ahidratsy. Misy trondro tsara sy ratsy ao anaty harato. Enjehina ny fiangonana ary maniry ny fahamarinana sy ny fiadanana ny olona sambatra eo anivony, ary koa ny fahitana mazava an’Andriamanitra. Taorian’ny nandehanany, dia tsy hitan’i Jesosy teo imasony ny fisehoan’ny tontolo tonga lafatra. Mandray fepetra kosa izy mba hanomanana ireo izay manaraka azy ka ny fandreseny sy ny asa fanavotana dia tsy maintsy haharihary tanteraka amin’ny hoavy, izay midika fa ny fiainana feno fanantenana no toetra tena ilaina amin’ny fiainam-piangonana. Saingy tsy amin'ny fanantenana diso (tena idealisma) fa amin'ny ezaka kely kokoa (na betsaka) ataon'ny vitsivitsy (na ny maro) dia afaka manatanteraka ny idealy amin'ny fanaovana ny fanjakan'Andriamanitra ho manan-kery na mamela azy io ho tonga tsikelikely. Ny vaovao tsara kosa dia ny hoe amin’ny fotoana voatondro — amin’ny fotoana mety indrindra — dia hiverina amin’ny voninahitra sy ny hery rehetra i Kristy. Amin’izay dia ho tanteraka ny fanantenantsika. Hanangana ny lanitra sy ny tany indray Jesosy Kristy, eny, havaoziny ny zava-drehetra. Farany, ny Ascension dia mampahatsiahy antsika mba tsy hanantena fa hiharihary tanteraka izy sy ny fitondrany, fa kosa mijanona ho miafina amin’ny lavidavitra. Ny fiakarany ho any an-danitra dia mampahatsiahy antsika ny amin’ny ilana ny hanohy ny fanantenana an’i Kristy sy ny fanatanterahana amin’ny hoavy ny zavatra nentiny teo amin’ny fanompoany teto an-tany. Mampahatsiahy antsika ny hiandry sy hiandrandra ny fiverenan’i Kristy, entina amim-pifaliana sy amim-pahatokiana, izay hiaraka amin’ny fanambarana ny fahafenoan’ny asa fanavotana ataony amin’ny maha-Tompon’ny tompo rehetra sy Mpanjakan’ny mpanjaka rehetra azy, amin’ny maha-Mpanavotra azy. ny zavaboary rehetra.
3 Ny fanehoan-kevitr'i Calvin momba ny 2. Korintiana 2,5.